အောက်တိုဘာလ 5, 2017 တွင် 1:05 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 6, 2017 တွင် 1:36 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 7, 2017 တွင် 1:13 ညနေ
ငါပြင်ဆင်ရန်ဘာသာပြန်ချက်ပြုပါလာတဲ့အခါငါကိုအတည်ပြုရန်ဘာသာပြန်ချက်ပေါ် click လုပ်ပေမယ့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်…
အောက်တိုဘာလ 8, 2017 တွင် 12:58 နံနက်
ငါပြင်ဆင်ရန်စာမျက်နှာပေါ်တွင် icon တွေကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဘာသာပြန်ချက် interface ကိုမမွငျနိုငျ
ဒီအများဆုံးဖွယ်ရှိတဲ့ jQueryUI ပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ပွား, jQueryUI မရှိအခြား version ကိုသင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်သို့မဟုတ်အခြား plugin ကိုအားဖြင့်ထည့်သွင်းကြောင်းစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး,
သင်တို့သည်လည်းအဆင့်မြင့် parameter သည် override အ jQueryUI စမ်းသုံးကြည့်စေခြင်း (1.8.24 ကောင်းတစ်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်)
ဇန္နဝါရီလ 14, 2018 တွင် 11:18 ညနေ
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 11:58 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 7, 2017 တွင် 8:33 ညနေ
ဒီဗားရှင်း php7 သဟဇာတဖြစ်?
နိုဝင်ဘာလ 9, 2017 တွင် 6:45 ညနေ
မတ်လ 3, 2018 တွင် 12:34 ညနေ
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 11:52 နံနက်
Yeison Gomez ကပြောပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 20, 2017 တွင် 6:00 နံနက်
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 1:14 ညနေ
Gino Côté ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 27, 2017 တွင် 11:39 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 27, 2017 တွင် 11:47 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 12, 2018 တွင် 11:15 နံနက်
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 12:03 ညနေ
ဇန္နဝါရီလ 12, 2018 တွင် 1:25 ညနေ
The Plugin “Transposh WordPress Translation” appears to be abandoned (updated 27 ဒီဇင်ဘာလ 2014, tested to WP 4.1.21).
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 11:59 နံနက်
ဇန္နဝါရီလ 20, 2018 တွင် 7:45 နံနက်
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 11:57 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2018 တွင် 10:37 ညနေ
– ပဌမ, pages are not translated, even while setting them to draft then publish again. I see the progress bar but nothing happens. Nothing is translated in front end while it says 20 pages translated in the dashboard.
– ထိုအခါ, edit icons never show up when I tick the edit box. I tried here on your website and it is working, the problem should not be from my browser. But I don’t get it. No any icons.
* wordpress ကို 4.9.4
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 1:13 ညနေ
Waseem Khan ကပြောပါတယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2018 တွင် 7:38 နံနက်
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 1:12 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2018 တွင် 2:28 နံနက်
သို့သော် – Whz it is free? Are there Hidden Scripts? Just asking?
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 11:54 နံနက်
Abu Zafor ကပြောပါတယ်
မတ်လ 26, 2018 တွင် 7:27 ညနေ
ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 11:53 နံနက်
Mobiliario para tiendas ကပြောပါတယ်
ဧပြီလ 13, 2018 တွင် 11:07 နံနက်
မေ 16, 2018 တွင် 6:29 နံနက်